M4A Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ mebie M4A Files na ala
> Resource> Naghachi> M4A Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ mebie M4A Files na ala
Olee otú Naghachi M4A faịlụ?
M4A faịlụ, a makwaara dị ka Apple Lossless Encoder, bụ ihe audio format nke yiri MP4 faịlụ. Nanị ihe dị iche n'etiti ha bụ na M4A faịlụ dere dịghị video n'ime. Dị ka ihe ọdịyo faịlụ, ọ e ọtụtụ-eji Windows kọmputa, Mac kọmputa, dị iche iche music egwuregwu. Otú ọ dị, M4A faịlụ ọnwụ ike ka a mere site na-ezighị ezi nhichapụ, na nrụrụ aka na mebiri emebi ma ọ bụ ezighị music egwuregwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi ndị furu efu ma ọ rụrụ arụ M4A faịlụ, ị ga mkpa a na-atọ akụkụ M4A mgbake usoro.
Wondershare Photo Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ ike omume na-enyere gị aka naghachi M4A faịlụ effortlessly. Ọ na-akwado M4A mgbake si music Player, kọmputa, mpụga ike draịva na nchekwa kaadị.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery n'okpuru. The ikpe mbipute-enyere gị aka iṅomi ngwaọrụ nke mere na ị nwere ike ịlele ma M4A faịlụ chọta a usoro bụ ihe ị chọrọ iji naghachi ma ọ bụ.
Igosi M4A Iweghachite na 4 Nzọụkwụ
Cheta na: Nke a nkuzi dabeere Wondershare Photo Recovery for Mac. N'ihi na Windows ọrụ, biko download Wondershare Photo Recovery maka Windows ma na-agụ ya ọrụ ndu.
Mgbe wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume, ị ga-enwe 2 mgbake ụdịdị ịhọrọ site na mmalite interface.
Naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu M4A faịlụ, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mbụ. Ọ na-enye ndị mbụ filenames gị M4A faịlụ.
Ọ bụrụ na a mode adịghị arụ ọrụ nke ọma, i nwere ike ịgbalị "Raw Iweghachite". Ọ na-achọ oge na adịghị egosipụta mbụ filenames.
Nzọụkwụ 2 Họrọ Draịvụ Ị Lost Files ka iṅomi
Dị ka ị pụrụ ịhụ site ya interface, ike draịva na mpụga nchekwa ngwaọrụ niile ga-ahụrụ site a usoro. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ike mbanye ebe ị furu efu M4A faịlụ ka iṅomi. I nwekwara ike naghachi M4A faịlụ site na nchekwa na ngwaọrụ site na njikọ ya na Mac kwa.
Naghachi M4A faịlụ, biko họrọ "Audio" site click "Họrọ File Ụdị" nụchaa Doppler N'ihi.
Cheta na: Ị nwere ike ịkwụsị Doppler n'oge usoro ma ọ bụrụ na ị chọtara M4A faịlụ na ị chọrọ site na ịpị "Kwụsị" button.
Nzọụkwụ 3 Preview aha nke Lost M4A Files na-agbapụta ha na Mac
N'ebe a, anyị na-abịa ikpeazụ nzọụkwụ. Mgbe ike okokụre, hụrụ faịlụ ga-edepụtara na nchekwa. Ịnwere ike ihuchalu hụrụ M4A faịlụ site na ịpị nchekwa. Ị nwere ike naghachi M4A faịlụ selectively na-azọpụta ha na gị na Mac.
Ndetu: N'ihi na nchekwa nke mgbake, biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ ka ebe ị kwụsịrị ha.
SDHC Kaadị Iweghachite: Naghachi faịlụ site formatted ma ọ bụ merụọ SDHC Kaadị
Olee otú Igosi MacBook Pro Draịvụ Iweghachite
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Blackberry ọwa